Ciidanka AMISOM oo 10 qof ku dilay Sh.hoose | Baydhabo Online
Ciidanka AMISOM oo 10 qof ku dilay Sh.hoose
Ciidanka AMISOM ee jooga Soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe 10 qof ku dilay degaanka Calamada ee Gobolka Shabeellaha hoose kaddib markii ay si bareer ah gaari Caasi ah u jiirsiiyeen gaari ka mid ah kuwa ay wateen.
Gaariga Shacabka ay saarnaayeen oo Caasi ahaa ayaa ka yimid Afgooye,waxaana uu ku soo socday Muqdisho,waxaa ay Ciidanka AMISOM si ku talagal ah u jiirsiiyeen gaariga shacabka ah sida uu sheegay milkiilaha Gaariga Homay-ga ah.
Saalax Xuseen Cali,oo ah Ninka iska leh Caasiga ay dadka ku laayeen AMISOM ayaa sheegay in kaddib markii uu shilka dhacay ay Ciidanka AMISOM sii wateen safarkooda oo aysan gadaal u soo eegein,waxaana uu ku eedeeyay in ay si bareer ah u laayeen shacab Soomaaliyeed.
Qof goobjooge ah ayaa sheegay in Gaariga 1aad ee kolonyada AMISOM oo ku sii jeeday Afgooye uu jiiray Caasiga 10 Qofna halkaas ku dhimatay iyada oo kuwo kale oo dhaawac jajaban ahna la geeyay Isbitaal Madiina ee Muqdisho.
Gabood fallada Ciidanka AMISOM ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u kordhay bilihii la soo dhaafay,waana markii labaad bishan gudaheeda ay dad rayid ah ku laayaan Gobolka Shabeellaha hoose oo kaliya.
Billowgii Bishan ayey ahayd markii ay 2wiil oo dhallinayaro ah iyo 70 Neef oo Geel ah ku dileen Tuulo hoostagta degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha hoose.